Construction jobs in Myanmar
Job Summary We are urgently looking for HR Manager who is esteemed to work with our Organization.
Job Summary We are urgently looking for Driver (Yangon and Mandalay) who is esteemed to work with our Organization.
Yangon Full Time MMK 4,000,000 - 5,000,000
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္အတ ြက္လိုအပ္ေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ်ား၊ Report မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရပါမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
Warehouse Stock Controller Staff - Male (4 posts) Zin Htet Trading Co.,Ltd
- Stock ledger တွင်ကုန်ဝင်ကုန်ထွက်၊လက်ကျန်စာရင်းအား စစ်ဆေးပေးရမည်။- Ground Stock အား စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - မိမိတို့ဂိုဒေါင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသောပစ္စည်းများအား Damage,Loss အလေအလွင့်မဖြစ် စေရန်ထိန်းသိမ်း နိုင်ရမည်။
Rest of Myanmar Contract MMK 800,000 - 1,000,000
Accounting, Auditing & Finance3Admin & Office6Building & Architecture 1 Customer Service & Support 1 Engineering & Technology6Human Resources 1 Marketing & Communications 1 Sales 2
Yangon 19 Rest of Myanmar 2
Expats Preferred3Repats Preferred 4